Puzzly - ပဟေဠိဂိမ်းငွေကောက်ခံ APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » Puzzly - ပဟေဠိဂိမ်းစုစည်းမှု
Puzzly - ပဟေဠိဂိမ်းငွေကောက်ခံ APK ကို
Puzzly ပျော်စရာအဘို့အပဟေဠိ play နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာသင့်ရဲ့ယုတ္တိဗေဒကျွမ်းကျင်မှုစိန်ခေါ်ဖို့ Connect ကို, လုပ်ကွက်, Rolling Ball ကို, Tangram နှင့် more.Want တူသောလူကြိုက်များပဟေဠိဂိမ်းအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်ရာအများစုမှာစွဲလမ်းပဟေဠိတစ်ခုအသစ်ဒီဇိုင်းဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းပါသလဲ သငျသညျကျိန်းသေဒီစုဆောင်းမှုအတွက်ပဟေဠိအဆင့်ဆင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်ကျေနပ်ပါလိမ့်မည်။ (ပိုအဆင့်ဆင့်နှင့် Gameplay သွားလာရင်းဖြစ်ကြသည်။ )
• ချိတ်ဆက်: Connect ကို Dots & ထူးခြားသော Paths ကိုရှာပါ
• Block: လုပ်ကွက်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဖန်တီး
• လှိမ့ Ball: အ Ball ကိုလှိမ့မှလျှောလုပ်ကွက်
• TANGRAM: ရောင်စုံပိုငျးပိုငျးနဲ့ Square ကို Up ကိုဖြည့်ပါ
• ONE လေဖြတ်: တစ်ခုမှာလိုင်းနှင့်အတူအားလုံး Dots ချိတ်ဆက်ပါ
• ထှကျပွေး: အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ Unblock နီ Block ကိုအထဲက
• Trace: တစ်ခုမှာလိုင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အားလုံးလုပ်ကွက်များတွင်ဖြည့်ပါ
• ရေပြွန်တပ်ဆင်သူ: တစ်ပြီးပြည့်စုံသောပိုက် Make မှအားလုံးပူးတွဲချိတ်ဆက်ပါ
• ကြိုးကြီး: ဆွဲလိုင်းအချို့ပုံစံများပုံဖော်ဖို့
• TWO dots: မျဥ်းသို့မဟုတ်ပုံရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့်နှစ်ဦး Dots Bump
• SUDOKU: သင့်ဦးနှောက်ပါဝါကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်9×9Grid ဖြည့်ပါ
• အချပ်: အသုံးပြုမှု3slicers တစ်ဘုတ်ဖြတ်အလုံအလောက်ကြယ်များရရှိရန်
• ဝင်္: အဝင်္ကနေ Dot ESCAP ကူညီပါရန်ပွတ်ဆွဲ
• ဂန္ထဝင်ပဟေဠိဂိမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီးစွဲလမ်း Gameplay
- ကသာအကောင်းဆုံး & လူကြိုက်များပဟေဠိကိုရွေးချယ်ကြသည်, သင်တဦးတည်းဂိမ်းထဲမှာကစားရမှာအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုကစားနိုင်ပါတယ်။
• သန့်ရှင်း Interfaces နှင့်အတူရှင်းလင်းမည် Graphics
- အမျိုးမျိုးပဟေဠိကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် "အရှင်ဘုရား" ဖို့ "အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော" ကနေဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်အလွန်ရှင်းလင်းသော & လွယ်ကူသောဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။
• ဒါဟာနှင့်အတူစိတ်ကုန်နေသောခံစားရဘယ်ချိန်မဆို & ဘယ်တော့မှဒါဟာ Play
- ဒါဟာသင်ကစားရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမအချိန်ကန့်သတ်ထားပြီး, သင်ဘယ်အချိန်မဆို & ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှာစွဲလမ်းပဟေဠိ၏ပျော်စရာခံစားနိုင်။
- သင်ဖမ်းရသည့်အခါအကူအညီအတွက် "အရိပ်အမြွက်" ကိုသုံးပါ။
- တိုင်းတစ်ခုတည်းပဟေဠိဂိမ်းအဘို့သင့်ရမှတ်စစ်ဆေးရန် "စာရင်းအင်းများ" icon လေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
- အဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းနေဖြင့်ပိုပြီးပဟေဠိ Unlock ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တှနျ့ဆုတျနဲ့မကစားပါနဲ့ Puzzly ဘို့ အခမဲ့ ယခု! ယခုအားလုံးတဦးတည်းပဟေဠိစုဆောင်းခြင်းဂိမ်းထဲမှာသူများအကောင်းဆုံးဦးနှောက်ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွင်တစ်ကြိမ်ခံစားကြည့်ပါ!
- Optimized 'နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှု "
- ခြုံငုံဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် fixed ချို့ယွင်းမှုများ
31.04 ကို MB
ပဟေဠိ Saga စတူဒီယို
လုပ်ကွက်များ - ဖယ်ရှားခြင်း -